[Ankapobeny ] 29 Oktobra, 2009 09:15
[Ankapobeny ] 14 Oktobra, 2009 09:50
Arabaina fa tratry ny fety
Efa ela tsy niblaogy ary efa saika adino ary ny oe tokony hamoaka lahatsoratra efa maro ny draft ato fa saingy tsy vitako h@ ny farany matetika ka dia manov hafa indray avy eo. Mety ho gaga angamba ianareo mahita io lohateny io fa dia faly aho mampandre anareo namana mpamaky ny blaogiko fa tsingeritaona-ko ny andro androany e! Efa antitra ny tena efa hananika ny efapolo indray izao. Efa mihamaro ny volo fotsy! lol
Tsy tafa-blaogy teo aloa teo fa sahirana mikarakara ny asa sy ny tokatrano e! aza tsiny fa maro ireo blaogy mahafinaritra azonareo vakina no sady mamoaka vaovao mahalina hatrany tsy hanonana anarana blaogy aho fa sao misy adinoko ka tezitra eo ny sasany tsy voalaza. Misy ihany ny vaovao fa saingy ny mampalahelo no betsaka ka aleoko tazomina ho ahy samirery aloha fa mbola tsy fotoana izao ny hitantarako azy aminareo.
Izay fa dia mankahery anareo rehetra dia mirary soa e! Samy ho tahin'Andriamanitra.